आनाले देखाइन् ! – Mero Film
आनाले देखाइन् !
जेरी डेब्यू हिरोइन आना शर्माको ग्याङस्टार ब्लूज चलेन । यो फिल्म नचल्दा आनालाई जस्तो घाटा अरुलाई भएन । आना सिनेमा गर्दा रोज्ने गर्छिन् । फिल्मीकर्मीको सम्पर्कमा कम आउने आनालाई निर्माताले लगानी गर्न खोजेका छैनन् ।
आनाको सिनेमा हल्ला कम भएपनि प्रेमी हल्ला धेरै हुन्छ । प्रेमी पाएपछि उनले सिनेमाको लगाब विर्सिएको भन्ने टिप्पणी पनि गरिन्छ । आनाले इन्स्टाग्राममा एउटा तस्बिर राखेकी छिन् । गर्मीका कारण स्विमिङ पूलमा अहिले हिरोइनहरुको भीड लागेको छ । तर, स्वस्मिङ पूल गर्मी छल्ने बहाना बनेको छ ।
हिरोइन स्वेता खड्काले गर्मी छल्न स्विमिङ पूलमा पौडिएको तस्बिर हिट भयो । अब, आनाको पनि यस्तै फोटो आएको छ । स्विमिङ कस्ट्यूममा आनाको सेल्फी कडा छ । स्विमिङ पूलमा पौडदा आनालाई शित्तल भएपनि उनको तस्बिरले भने उनका फ्यानलाई गर्मी बढाइदिन सक्छ ।
२०७५ असार ६ गते १८:१२ मा प्रकाशित